SingForYou.net - Nga Yae Lamin
Nga Yae Lamin
Tags : For My Baby ~~~ MALTHIDAR
By : MH on Feb 26, 2010
Nga Yae Lamin's Description
ဒီသီချင်းကို Upload လုပ်ပေးသော Admin အဖွဲ့  နှင့် သီချင်းပို့ပေးတဲ့ မ Forevermoe တို့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းက ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ပါ။ သီချင်းထဲကလိုကျွန်တော့်ဘ၀ကို အမှောင်တွေထဲက လမ်းပြဆွဲထုတ်ပေးတဲ့ ငွေလမင်းလို နတ်သမီးလေး အတွက် ကျွန်တော်သိပ်ဆိုပေးချင်နေတဲ့ သီချင်းပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငွေလမင်း နှစ်ခြိုက်ကျေနပ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ~~~ SFY မိသားစုတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ ။
saikyaw on Mar 8, 2010 0
ရန်ကုန်ရှမ်းလေး ကို တောင်ပေါ်ကရှမ်းကြီး က အားပေးသွားပါတယ်..အချင်းချင်းကောင်းတယ် ကြီးပဲ ပြော နေရင်တော့ အများပြော မှာဆိုးလို့ မပြော တော့ဘူး..နားလည်လိုက်တော့ ကိုယ့် ဖာသာ ကိုနော်..
deathbloodydeath on Feb 28, 2010 0
So great, man! A very special5stars from me!
MH on Feb 28, 2010 0
ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်တယ်ဗျာ ကိုဒတ် .. ချောင်ထဲထိလိုက်အားပေးခဲ့တာ Thank You ဗျာ။
thuyeekg on Feb 27, 2010 0
ငွေလမင်း မယ်သီတာဆိုတော့ အကြီးကြီးများလားဟင် pagoda pagoda ဟိဟိ အားပေးသွားတယ်ရဲဘော်...
MH on Feb 27, 2010 0
ပြောပြဘူး ပြောပြဘူး ... သတ်ချင်သတ်ပလိုက်ကွ ဟိဟိ။
wadanar on Feb 27, 2010 0
WOW... tal soe tae sar par lar fri MH yae:) it is good singing par .......
ဘော်ကြီးရေ စာတင်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ လူပါစိုကုန်ပြီ ။ မူးမူးနဲ့ခွက်မှောက်ကျသွားလို့ ။
mal thi tar g lar yout nar sin thwar tar see lite par yelz.... ngwe la minnn g ka tot shal pelz kwar......a yan yan ko nit tet te song lay par...d song ko listen yin nelz ta mo g khan sar ya te chint......bravoooooooooo..:clap ;calp ;clap...full mooddddddddddd !!!!!...million starz for u bro g...>>>>>>>>
ကျေးဇူးတင်တယ် ညီမရေ ။ ရင်ဘတ်နဲ့ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ရင်ဘတ်နဲ့ နားထောင်ပေးသွားတာ thank you ပါဗျာ။ မယ်သီတာကို တွေ့လိုက်တယ် ဟလား ။ လျှောက်မပြောရဘူးနော် ။
_¶¶__¶¶______________ကိုMH_ဘ၀ရဲ_့အရမ်းအရေးကြီးတဲ့____________ _¶¶__¶¶__________________________________________________ _¶¶__¶¶___________သီချင်းတပုဒ်က_နားထောင်လို_့အရမ်းကောင်းတယ်...__ __¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___________________________________________ ___¶¶___¶¶_______________ကိုMH_ရဲ_့ငွေလမင်းလို_နတ်သမီးလေး_____ ________¶¶¶¶__________________________________________________ ________¶¶_____¶¶¶¶¶_______နှစ်ခြိုက်ကျေနပ်ပါစေလို_့ဆုတောင်းရင်း_______ ________¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_________________________________________ _______________¶¶¶¶¶__________________________________________ _______________¶¶_¶¶___________၅စတားစ်________________________ ____¶¶¶¶_______¶¶__¶¶_¶¶__¶¶__________________________________ ___¶¶__¶¶_____________¶¶__¶¶________From_KoBurma______________ ___¶¶__________________¶¶¶¶___________________________________ ___¶¶__¶¶___¶¶__________¶¶____________________________________ ____¶¶¶¶__¶¶__¶¶________¶¶____________________________________ __________¶¶__¶¶______________________________________________ __________¶¶__¶¶____¶¶________________________________________ ___________¶¶¶¶___¶¶__¶¶______________________________________ __¶¶_¶¶___________¶¶__¶¶______________________________________ _¶__¶__¶__________¶¶__¶¶__¶¶__________________________________ _¶_____¶____________¶¶____¶¶__________________________________ __¶___¶___________________¶¶__________________________________ ___¶_¶____________________¶¶__________________________________ ____¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶____________________________
ကိုဗားရေ .... နားထောင်ခံစားပေးသွားတာ ကျေးဇူးနော်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ ။
ကို MH ငွေလမင်းက သူလဲဟင်...ဒီသီချင်းက Orchid အကြိုက် ဆုံးသီချင်းလေးမို့ ဘယ်သူ့အတွက်ဆိုတာလဲတော့မသိဘူး အရမ်းနှစ်သက်စွာ နားဆင်သွားတယ် နောက်ခံ လေးဖြူကဘယ် သူမှန်းမသိလောက်အောင်ကောင်းနေတယ်...တကယ်...
ဟိဟိ ... လေးဖြူလေ တော်တော်ဆိုးတယ် ။ အေးဆေးနေပါဆိုတာ မရဘူးဇွတ်လိုက်ဆိုနေတယ်။ နားဆင်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးဗျာ ။
thant on Feb 27, 2010 0
wooooww........kg hla chi lar bro MH yay........thu lay lal ayann ko nit thet mhar par......******
မမသန့်ရေ ... အကုန်ထည့်ဆိုလိုက်တာပဲဗျာ ။ နောက်တပုဒ် လာဦးမယ် ။ အားပေးဦးနော် ။
lalaynge on Feb 27, 2010 0
ကိုကြီး MH က မယ်သီတာအတွက် ခံစားချက်အပြည့်နဲ ဟဲထားပါတယ် ဆိုနေမှ ကိုလေးဖြူက အလိုက်မသိပဲ လိုက်ဆိုနေတယ်..တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုလေးဖြူပဲ..ဟိ..ကိုကြီးMH ရယ် ကိုလေးဖြူအတွက်ရယ် တယောက်စတား ၅လုံး ညီညီမျမျ ထားခဲ့ပီ..:P
ရဘူးဟ ဒီသီချင်းနဲ့ စာမျက်နှာ၁၅ က လေးဖြူအသံဖျောက်လို့ ရဘူး။ တတ်နိုင်ဘူး ဆိုရမှာပဲ ဟိဟိ။
Hummmm LP vocal par nay dar...ma mite buu.....!! But Your vocal was similar to LP ....Great singing and perfect with full mood !!! Hope that she defenitely will love this song....!! CHeers bro ROKKER GYI !!
ရဘူး ပါရာရေ ... လေးဖြူကြီးက ဖျောက်လို့မရဘူး ဘီလိုဖြစ်လဲမသိပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ညှိဆိုလိုက်ရတယ် ။ကျေးဇူးနော် ။
မယ်သီတာအတွက် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဟဲထားခြင်းပေါ့နော် ... ***** for မယ်သီတာ (အဲ ဟုတ်ပါဘူး ယောင်လို့ 5* for bro MH)
ကိုချစ် အတွက်ဆိုထားတာ ဟိဟိ ။
seven on Feb 26, 2010 0
~~Bro MH...so twar tar Full Mood phit nay tort..a yann ko kg twar par tal... *********************************!!~~..
ဘရာသာ ကြီးရေ ... ပြန်တော့မယ်ကြားတယ် ကြိုလွမ်းထားမယ် ။ အရာရာ ဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေဗျာ ။
ahphyuyaung on Feb 26, 2010 0
wow!!! so so good bro yae.. I believe she will like it... ********************** :))
ဟိဟိ လမ်းကြုံရင် မေးခဲ့ပေးနော် သိရား ။
wow really nice to listen bro ... 5*
ဟစ်ပိုရေ .... Really Thank You ပါ sis ။ အိုကေ တယ်နော် :)
Really great singing ... arr pay thwar pi nor ... 5*4u :)))))
ကျေးဇူးပါ sis ရေ .... အမြဲအားပေးနေတဲ့ သူရကီ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ။
forevermoe on Feb 26, 2010 0
wowwww....bro MH gg ...BOB ko so ya p byooo...:P so htar tarr ta kal shal pae byoooo ...full mood nae ko so twer tarrayan mite tal ...bravoooooooooo..:clap:clap:clap.>>> ma moe arr pay twer par tal shinn...ngwe la min g ko ...:D
မမိုးရေ ...အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။တကယ်ကိုဆိုချင်နေတဲ့ သီချင်းပါ။ ခုလို အချိန်ပေးပြီး သီချင်းတွေတင်ပေး နားလဲနားထောင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတကယ်တင်တယ်ဗျာ ။ ဟိဟိ မှားတာလေးလဲခွင့်လွှတ်ပေးနော် ။
shae mhar bar pyaw hter tar lal byoo .. ma the' kwal woo .... sing hter tar tot shal pal byar .. lone wa lan htwat nay tal ..... de vocal ka ma kwal tay woo ... hee :D
for my baby .... လို့ပြောတာပါ ဘရာသာရေ။ ဟဟ .... MH တို့ကွဲတာ ခပ်ရှားရှားရယ် ။ ကြွက်တွင်းဆိုလား ပြောကြတာပဲ ။ ကြာဿပတေးသား မို့ပါ။ :)
skywalker on Feb 26, 2010 0
ဘူလေးကိုဆိုတာလဲသိဘူးးးလိုရာဆွဲတွေးလိုက် လို့ ငွေလမင်းလို ၀ိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်ဦးမယ်...မယ်သီတာက လမင်းကြီးထင်တယ်..ခွိခွိ ..
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် ဆိုတာတော့ သေချာတယ်။